Nandresy tamin'ny fifidianana tany an-toerana tany Namibia i Adolf Hitler
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'ny dia Namibia » Nandresy tamin'ny fifidianana tany an-toerana tany Namibia i Adolf Hitler
Raha ny tatitra avy any Namibia, zanatany alemanina teo aloha, lehilahy antsoina hoe Adolf Hitler nandresy tamin'ny fifidianana teo an-toerana tamin'ny fandresena lehibe.
Ny vaovao tsara dia ny mpanao politika Namibianina notononina taorian'ny führer, Aleman'i Alemà farany, nilaza fa tsy mikasa ny hanjakazaka eran'izao tontolo izao izy.
Adolf Hitler Uunona dia nilatsaka tamin'ny tapakilan'ny antoko SWAPO Party of Namibia. Nahasaraka vato 1,196 213 izy, raha 5,000 ny an'ny mpifaninana aminy, ary nahazo seza tao amin'ny filankevi-pitantanan'ny faritra Oshana. Ny isam-pokontany Ompundja, izay soloiny dia tsy latsaky ny XNUMX ny mponina ary efa noheverina ho fiarovana mafy SWAPO.
Uunona dia nilaza tamin'ny tabloid alemà Bild fa tsy toy ny anarany malaza ratsy izy, tsy manana fanirian-daza amin'ny fanjakazakan'izao tontolo izao, na koa amin'ny fandresena an'i Oshana.
“Nantsoin'ny raiko an'ity lehilahy ity aho. Mety tsy azony hoe inona no nijoroan'i Adolf Hitler, ”hoy ny fanazavany. Nilaza izy fa matetika dia mandeha amin'i Adolf Uunona ary efa tara loatra ho azy izao raha hanova ny anarany.
Namibia dia firenena any amin'ny faritra andrefan'i Afrika atsimo. Ny firenena dia zanatany taloha tany Alemana ary mizara anarana an-dalambe sy anaram-pianakaviana amin'ny firenena eropeana.
Nahazo fahaleovan-tena tanteraka tamin'ny taona 1990, taorian'ny tolona mitam-piadiana am-polony taona maro nanohitra ny fanjakan'ny apartheid Africa South.
SWAPO dia nipoitra ho hetsika fanoherana ny fahaleovan-tena ary nanjary hery politika mpitarika hatramin'ny nanjakan'ny firenena feno, na dia nihena aza ny lazany tao anatin'izay taona maro lasa izay.
Tombanana ho olona 1,200 XNUMX no mbola mitondra ny anarana Hitler ankehitriny, izay ny ankamaroan'izy ireo dia tsy heverina ho havan'ilay mpanao didy jadona nazia.
Ny tena fianakaviana dia heverina fa nanova ny anarany taorian'ny ady mba hanafenana izay fifandraisana misy eo amin'ny mpitondra fasista.
Heathrow hanomboka handoa £ 5 ho an'ny fidinan'ny seranam-piaramanidina
Lufthansa dia nitatitra ny fitomboan'ny famandrihana mafy mandritra ny fialantsasatra ho avy